"Steven Gerrard Ayaa Ka Wanaagsanaa Frank Lampard Iyo Paul Scholes, Markaad La Ciyaarto Oo Kaliya Ayuun Baad Qiimayn Kartaa" - Gool24.Net
“Steven Gerrard Ayaa Ka Wanaagsanaa Frank Lampard Iyo Paul Scholes, Markaad La Ciyaarto Oo Kaliya Ayuun Baad Qiimayn Kartaa”
Steven Gerrard, Paul Scholes iyo Frank Lampard waxay ahaayeen xiddigihii khadka dhexe ee saddexda kooxood ee Liverpool, Manchester United iyo Chelsea, laakiin xulkooda qaranka England, waxa uu nasiib u yeeshay in saddexdooduba ay hal mar u wada dheelaan oo ay u raadiyaan guulo inkasta oo aanay usoo dhicin Koob Adduun.
Saddexdan halyey oo iku suntan taariikhda kooxahooda, waxa marar badan laga dooday midkooda wanaagsanaa hase yeeshee, kabtanka Liverpool ee Steven Gerrard ayaa ugu dambayntii noqday xiddigga kusoo baxay qiimaynta laacib dhamaantood la ciyaaray oo garoonka kula xafiiltamay.
Mark Noble oo ah kabtanka West Ham United, waxa uu loollan lasoo galay Lampard, Gerrard iyo Shcoles, waxaana uu bannaanka soo dhigay qiimayntiisa shaqsiga ah iyo waxyaabaha ay ku kala sarreeyeen saddexdan ciyaartoy.
Lampard waxa uu Chelsea u dhaliyey goolal badan marka la barbar-dhigo heerka dhalinta goolasha ee labada ciyaartoy ee kale, laakiin Paul Scholes oo cimrigiisa oo dhan kusoo qaatay Old Trafford, waxa uu ahaa mid dhalintiisu yar tahay oo khadka dhexe ka habeeya kubadda naadigiisa guulaha u horseedaya.
Kabtankii hore ee Liverpool ee Steven Gerrard, waxa isaguna uu ahaa mid goolal badan dhaliyey goolal badan, balse hoggaamintiisa iyo hal-abuurkiisa kale ayaa 15 sannadood oo ka mid ah cimrigiisii Anfield ka dhigay xiddiga ugu magaca weyn ee ay jamaahiirta iyo xattaa laacibiinta kale ee garoonka ku sugan ka sugaan guusha. Laakiin nasiibka ayaa ka hor istaagay in aakhirkii xirfaddiisa uu u dabbaal-dego horyaalka Premier League oo kulankii ugu dambeeyey oo uu siibtay uu isagu sabab u noqday in koobka lagaga guuleysto.]
Halyeyga West Ham ee Noble oo qiimaynta uu saddexdan ku sameeyey soo bandhigaya ayaa waxa uu yidhi: “Aniga i rumaysta, marka aan sheegayo ciyaartoy xiifan, kaliya waxaad sheegi karaysaa inuu wanaagsan yahay marka aad ciyaar iskaga hor timaaddaan. Saddexdooduba waxay ahaayeen ciyaartooyo sare oo iskood u taagan, laakiin Steven G ayaa ahaa ciyaartoy dhamaystiran.”
Nobel waxa kale oo uu sheegay in Steven Gerrard uu ahaa ciyaartoyga ugu wanaagsanaa ee abid uu ka hor tegay, waxaanu ku xigsiiyey Carlos Tevez iyo Dimitri Payet.
Gerrad waxa uu Liverpool u ciyaaray 504 kulan oo Premier League waxaanu u dhaliyey 121 gool, isagoo caawiyey 70 gool oo xiddigaha kale ee kooxdiisu dhaliyeen.
Sannadkii 2005 ayuu ku guuleystay Champions League, iyadoo ay kooxdiisa Liverpool qaab layaab leh uga daba-timid AC Milan oo saddex gool kala hor martay qaybtii hore.